CrossFire: Legends Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » CrossFire: Legends
CrossFire: Legends APK ကို
ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အအောင်မြင်ဆုံး FPS ဂိမ်း၏မိုဘိုင်းဗားရှင်း CrossFire: Legends ယခုအသစ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှငျ့သငျမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အပေါ်တူညီသောချောမွေ့ဖြစ်လို့ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအာမခံကြောင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ၎င်း၏ PC ကိုယခင်များ၏ခြုံငုံဗေဒဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာယခုသူတို့သည် PC-အပေါ်မိုဘိုင်းပေါ်ခဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အရေးယူ relive နိုငျပါသညျ! သငျသညျပြင်းထန်သောဂိမ်းလိုသလား? ကျနော်တို့ကရရှိပါသည်! ရူးသွပ်ဂရပ်ဖစ်? ကြှနျုပျတို့လညျးထိုရရှိပါသည်! ထိုလူအပေါင်းတို့သောတူညီဂန္ Mutant နှင့် PvP ကစားသမားကိုချစ်ရန်လာစဉ်ဆက်မပြတ် remolded နှင့်ကစားသမားပိုပြီးပြန်လာမယ့်စောင့်ရှောက်သေချာစေရန်တိုးတက်ကြ modes! ပို. ပင်လိုပါသလား? ထိုအခါမိုဘိုင်းဗားရှင်းသီးသန့်အတွက် All-သစ်ကိုစစ်တိုက် Royale mode ကိုထွက်များစစ်ဆေး! အဆိုပါတစ်ဒါဇင်အားဖြင့် zany နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာခွဲများသည် Modes နှင့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ, CrossFire: Legends '' စစ်တိုက် Royale mode ကိုရောနှောသူတို့သာအိပ်မက်မက်ဖူးတဲ့ CrossFire အတွေ့အကြုံကိုအသစ်အဟောင်းကစားသမားဆောင်ကြဉ်းမည်!
[ထူးခြားချက်များ] 1 ။ Mutant Mode ကို: ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ယခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိုဘိုင်းပေါ်တွင် PC ကိုဗားရှင်းကနေချစ်ဂန္! တစ်ဦးပွဲစဉ်ရဲ့အစမှာ, ရှိသမျှကစားသမားကျပန်းနှစ်ခုအုပ်စု-လူ့ခြင်းနှင့် Mutant သို့ခွဲခြားထားတယ်။ လူသားတွေဟာ Mutant သတ်အံ့သောငှါသူတို့၏လက်နက်များသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်; Mutant လူသားမြားသတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်ကူးစက်ရန်လိုအပ်သည်။ မျိုးစိတ်များ၏စစ်တိုက်ယခုစတင်သည်!
2 ။ TDM: ပွဲအနိုင်ရဖို့အချိန်ကန့်သတ်အတွင်းရန်သူလိုအပ်သောအရေအတွက်ကို Kill ။ hardcore FPS ပရိသတ်များမရှိထပ်မံကြည့်ရှု! ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်း mode ကိုသင့်သွေးဆူအောင်တည်ပါစေလိမ့်မည်!
3 ။ BR Mode ကို: ဒါဟာစစ်တိုက်တော်ဝင် mode မှာရပ်နေနောက်ဆုံးလူကိုပဲ! ကစားသမားတစ်ကိုယ်တော်, Duo, သို့မဟုတ်ကစားသမား mode မှာပွဲ join ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ, နှင့်ပွဲစဉ်, ပေါ်ကလေထီးဖြင့်ခုန်ချသဲမုန်တိုင်းထဲကပြေးထွက်လု, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရှာဖွေနေ, ရန်သူများကိုချေမှုန်း, နှင့်နောက်ဆုံးလူကို / အသင်းရပ်တည်မှုဖြစ်တိုက်ခိုက်နေပါဝင်သည်။ ပိုများသောခွဲများသည် Modes, မြေပုံများနှင့်ပစ္စည်းများကိုလစဉ်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အခုတော့အတူတကွသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းငှါသငျတို့ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်နေဒဏ္ဍာရီဖြစ်လာ The-join အချိန်ပဲ!
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: https://www.facebook.com/PlayCFLegends/
Google ကကြောင့်တစ်ဦး update ကိုမူဝါဒအပြောင်းအလဲများ Play နှင့်မျှမသစ်ကိုအကြောင်းအရာများပါဝင်သည်။
732.36 ကို MB